FAQs - Huizhou Aimsea Newway Technology Co., Ltd.
Fa maninona no mampiasa stabilizer PVC?
Ny PVC amin'ny mari-pana dia ampiana 140 degre eo ho eo, izay tsy hanampy ny laoka lo, fa amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao plastika ny PVC, tsy azo zahana, ka mba hamokarana vokatra PVC dia tsy maintsy manampy hafanana ambonimbony kokoa izy avy eo. tsy maintsy hiditra ao amin'ny stabilizer ianao mba hahatonga ny PVC tsy ho lo, mba hanomezana fahombiazana amin'ny fikarakarana PVC.
Inona ny calcium sy ny stabilizer an'ny zinc?
Ny vokatra PVC ampiasaina amin'ny famokarana stabilizers dia ampiasaina matetika ho an'ny stabilizer sira sy savony vita amin'ny savony, noho ny fampiasana sira firaka marobe, miteraka fandotoana ny tontolo iainana, mari-pana plastika avo lenta, fikorianan'ny vahaolana tsy mahomby, ny fiparitahan'ny solifara sy ny olana hafa. Indrindra amin'ireo olona manana vokatra plastika, mihamitombo hatrany hatrany ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana, ny fampivoarana ny calcium sy ny zinc composite stabilizer izay tsy misy poizina, ny sain'ny olona bebe kokoa. Ny stabiliseran'ny calcium sy ny zinc tsy misy poizina dia calcium sy zinc, masira voajanahary, phosite, polyol, antioxidants ary solvents ary singa hafa ao amin'ilay sarotra. Calcium sy zinc stabilizer ary resin ary plastika mifanentana, ny mangarahara dia tsara, tsy mora miakatra, ny habetsaky ny kely, mora ampiasaina.
Inona no atao hoe serivisy fanaingoana?
Araka ny filazan'ny mpanjifa ny santionany nomena, ny takiana takiana, mba handinihana sy hizahana santionany, fikarohana sy fampandrosoana ny kalsioma mahomby sy ny stabilizer zinc hahatrarana ny filan'ny tsena, amin'ny fotoana rehetra hanomezana fanampiana ara-teknika sy vahaolana.
Azo omena maimaimpoana ve ny santionany?
Fanontaniana tonga soa, afaka maimaimpoana manome santionany 1kg amin'ny orinasanao.
Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile, Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Heat Stabilizer, Pvc Additives, Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Stabilizer,